किन बाइकिङले हामीलाई फिट राख्छ - यदि तपाईसँग "घुँडा"
अस्ट्रियार्थ्रिसिस र घुट्ने संयुक्त समस्याहरु मा साइकल चलाउने?
साइकल चलिरहेको बेला फिटनेस प्रभाव हुन्छ?
सायक्लिंग सर्वोत्तम स्वस्थ सहनशीलताको खेल मध्ये एक र उत्तम हृदय रोग कसरत हो।
काठीमा फर्म - किन साइकल चलाउन हामीलाई फिट राख्छ
यदि तपाइँ 30 मिनेट वरिपरि हप्तामा तीन वा चार पटक कठिन पेडल गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ राम्रो जीवनमा स्वास्थ्यमा आफ्नो जीवन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
जब साइकल चलाउँदा, काठी शरीरको वजनको 75 प्रतिशतको अवशोषण गर्दछ। फलस्वरूप, जोडीहरू खुट्टामा बोझिन्छन्।
बाइकिङ घुमाउने फिटनेस बढ्छ
यसकारण साइकल चलाउन पनि जोगिंग गर्ने एक राम्रो विकल्प हो। विशेष गरी मोटापेड र असहमत बेकन रोल साइक्लिङको विरुद्ध लडाइँमा एक फायदेमंद असर छ।
एक 75 किलोग्राम मानवले 720 किलोकोलोरीहरू मध्यम गतिमा मात्र एक घण्टा पछि जलाइन्छ। यो केवल एक चकलेट पट्टी भन्दा धेरै छ।
धेरै मानिसहरू डरलाग्दो छ कि साइकल चलाउने प्रभावित कृत्रिम कारवाहीमा अतिरिक्त तनाव ल्याउन सक्छ। तर आर्थोपिडिस्टहरूले सबैलाई स्पष्ट दिन्छन्: विपरीत मामला हो, किनकि युनिटी घुट्ने आचरणले कार्बिलिजमा पोषक तत्वहरूको परिवहन सुधार गर्दछ। साथै, यसको सेप्सूल र मेनिस्कस फाइदा हुन्छ।
वेरिकोजि रिजहरूबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई पनि साइकलिङ बिना गर्नु पर्दैन। विषम रगतले पैदल रेजहरूमा पनि फुर्सदको माध्यमबाट फैलिएको छ, हृदयमा एक पंप जस्तै। यो अक्सर कुनै पनि औषधि भन्दा राम्रो काम गर्दछ।
फिर्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण: सँधै एक सीधा मुद्रामा ध्यान दिनुहोस् र डच बाइक रेसिङ कारलाई मनपर्छ।
उल्लेखनीय फिटनेस प्रभावको लागि, तपाईंले हप्ताको कम्तिमा दुई घण्टा चक्र गर्नुपर्छ। कार्यभारलाई निरन्तरता दिनै पर्छ। शर्तलाई बलियो बनाउन, यो मध्य-दायरामा पेडल पर्याप्त छ, बिना सास हटाउन।
यदि गति अग्रभूमिमा छ भने, एक भनिन्छ अन्तराल प्रशिक्षण सिफारिश गरिएको छ। यहाँ एक तंग र आराम गति गति हरेक पाँच मिनेट। आवश्यक भएमा, सानो ब्रेक सम्मिलित गर्न सकिन्छ।
कसले लामो गतिमा लामो दूरीको दूरी बढाउँछ, मोटो जलाउन सक्छ। यसरी, साइकल चलाउने आदर्श खेल वजन कम गर्नका लागि हो। यसले स्वचालित रूपमा ओक्सीजनको दैनिक भाग प्रदान गर्दछ र सजिलै रोजगारीको जीवनमा एकीकृत हुन सक्छ। पनि काम र खरीदारी गर्ने तरिका बाइकिङ द्वारा प्रशिक्षण बाट स्वतन्त्र रूपमा लिइन्छ।
वैसे: यस्तो चक्र प्रशिक्षणले ट्रान्समा राम्रोसँग सेक्स हार्मोन ल्याउँछ। त्यहाँ अफवाहहरू छन् कि साइकलहरू राम्रो प्रेमिका हुन्। यद्यपि, यसका लागि कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन। त्यसैले यो पत्ता लगाउन प्रत्येकको लागि छ.